Waaxda Hiddaha & Dhaqanka | Wasaaradda Hiddaha & Tacliinta Sare
Taariikhda Soomaaliya iyo dhul ahaan meesha ay adduunka kaga taallo waxay ka dhigeen gobol muhiim ah, dadkeedana waxaa loo aqoonsaday inay bulsho leh astaamo lagu aqoonsado oo ay gaar u leeyihiin.
Wasaaraddu, iyadoo garwaaqsan dhaqanku udub-dhexaad u yahay astaanta qarannimo ee aanu leenahay, waxay qiimeyn weyn siin doontaa sidii sare loogu ilaalin lahaa, loona horumarin lahaa hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Waxaan ku kalsoonnahay in haddii si dhab ah loo fahmo dhaqanka iyo hiddaha wanaagsan ee Soomaalida inay keeni doonaan midnimo bulsho, taasoo ah arrin arrin ay Soomaaliya uga baahi badan tahay xilli kasta oo la dhaafay.
Waaxdani waxay mas’uul ka tahay siyaasadda iyo howlaha la xiriira dhaqanka iyo hiddaha oo ay mid yihiin maamulka maktabadaha; xusuus-dhowrayaasha qaranka (national archives); matxafyada iyo taallooyinka; ilaalinta iyo sare-u-qaadista fanka noocyadiisa kala duwan; iyo xarumaha dhaqanka ee gobollada.
Ujeeddooyinka adeegyada Waaxdani waa sidii nolosha shacabka wax weyn loogu kordhin lahaa iyadoo la adeegsanayo dhaqanka iyo hiddaha, isla markaana loo kobcin awoodda bahda ka shaqeysa fanka iyo dhaqanka si ay qeyb uga qaataan horumarka dhaqaale ee dalka, iyadoo la ogsoon yahay in bahda fanka iyo dhaqanka ay yihiin kuwa ugu dayacan bulshada inkastoo keydka ay hal-abuur ee ay soo saareen uu yahay mid aad hodan u ah.
Si loo gaaro hadafyada aan soo sheegnay, waxay Wasaaraddu kor ka maamushaa Maktabadda Qaranka, Matxafka Qaranka, Xarunta Afka Soomaaliga, iyo Akademiyada Soomaaliyeed ee Fanka iyo Sayniska.